Wholesale Goridhe Zvigadzirwa, Gorofu Zvigadzirwa Mugadziri | Shenzhen Feyond Yemitambo Co, Ltd.
Feyond Nhabvu inogona kusangana nezvinodiwa zvemapoka akasiyana evatengi ane akasiyana gorofu zvigadzirwa zvigadzirwa.
Gorofu Kudzidzisa Aids
Laser Gorofu Rangefinder
FEYOND GOLF, USAMBO KUMIRA
FEYOND SPORTS INOGONA KUSANGANA NEZVIDI ZVAKASIYANA ZVEMAOKO EVATENGI NEGOLF SUPPLIES PRODUCTS
Mazuva ano, isu tinotengesa uye tinogadzira ese marudzi ese zvigadzirwa zvemitambo yegorofu.
HighQuality Gorofu Kudzidzira kutema Net Wholesale- 深圳 市 飞 羊 运动 用品 用品 有限公司
Iyo Feyond Gorofu Kudzidzira Net yakakosha pamatanho ese, yakanakira vatangi vegorofu kudzidzira kurova uye kutsemura. 1.Mvura iriko. Iwe haugone kushandisa kosi yegorofu. Panguva ino, iwe unongofanirwa kuvhura iyi gorofu gorofu chero kwaunoda kuisa uyezve, wakasununguka kudzidzira yako gorufu kugona 2.Iyi gorji keji chimiro chetende. Paunenge uchidzidzira zvemukati, zvinogona kukuunzira iwe kunzwa kwakakosha 3.Iye yakakwira density jira re oxford rinoita kuti gorufu rino cage rigare rakaringana kutakura yako hit tsika kwenguva yakareba 4.Usati wadzidzira, iyi gorofa mambure iri nyore kuisa. Mushure meizvozvo, iwe unogona zvakare kuisunungura zviri nyore kuti ikubatsire kuronga ako ekudzidzisa matipi paunoda 5.This yekudzidzira gorofu chishandiso ishamwari yakanaka kana iwe uchida zororo, varaidzo kana tsika nezvimwe. 6.Swing yako tsvimbo yegoridhe uye rova ​​bhora mupeji yegorofu zvisinei kuti ine chiutsi kana kunaya kana mhepo. Izvo zvinongoenderana newe kuti usarudze kuti ndeipi uye kupi kwaunotanga yako yega gorufu rwendo. 7.Easy kuungana: Iyo gorofa mambure inokurumidza kumisikidza uye peta mu 2 mineti setup / kuparara kweimwe tsika. 8.Convenient: Imwe neimwe gorofu mambure ine yakasimba takura bhegi kukubatsira iwe kuchengeta uye kuinhonga nyore! Ndatenda! Type: Zvizarira Yepasi Mesh: Oxford Cloth Tsigira Rod Chinyorwa: Washington City Offices Ruvara: Dema, Girinhi Kukura: 200x100x140cm / 78.74x39.37x55.12 Yakavharwa Saizi: 50x25x10cm / 19.69x9.84x3.94 Nguva: Mukati, Kunze Dingindira: Mitambo Mutambo Wemitambo: Gorofu MOQ: 1pcs Paking: 1pcs / bhegi rekutakura
Teresikopu Laser gorofu rangefinder
Nei tichida iyo Goridhe Laser Rangefinder? Chimwe chezvinhu zvakaomesesa kuyera kana iwe uri mutsva kumutambo iri chinhambwe. Uye chimwe chezvinhu icho "wekare pro" ane dambudziko nacho kure. Chokwadi ndechekuti, tese tine dambudziko nekufungidzira kureba. . Yakarurama kusvika ± 0.55yards kubva 200-660yards; Matanho muYadhi kana Meter; Multiple modes (flagpole scanning modhi, gorofu materu akagadziriswa, kumhanya kuyerwa) _ Yakareba CR2 3V lithium bhatiri inosanganisirwa: 5000 nguva zvinobva zvadzima magetsi mushure memasekondi masere. Ergonomic, yakapfava casing dhizaini (ABS + PP), vamwe vangori PP, yedu gorofu renji inokupa iwe chiitiko chiri nani. > chinhambwe chekubaya, kuti iwe ugone kusarudza iyo chaiyo kirabhu uye rova ​​bhora uine chivimbo. Yepamberi Mureza Kuwana Tekinoroji kusefa iyo flagpole kubva kumashure zvinhu (matavi nehuswa) kuve nechokwadi kuti iwe wapfura mureza. Chekutanga Chinangwa Chekutanga Chinogona kubata chekutanga / padyo padyo pakati pezviyero zvakawanda zvakawanikwa, pasina kumirira chiratidzo chechipiri, sekudengenyeka.Zvinonyanya nyore kuisa uye kuchinjana bhatiri rinongoda kusundira iyo butiro, zvichienzaniswa nedzimwe gorofu renji. CR2 3V lithiamu bhatiri yaisanganisira, inogona kushandisa kanokwana kuita 3000 nguva pamwe chete, otomatiki kudzima mushure memasekonzi masere Iyo yakasimba yakasimba hardshell inotakura neine lining yakapfava nyore kuwana zipi, isiri nyore kushanduka, kudzivirira iyo renji yekuwana kubva mukukanganisa uye kudonha. Zviri nyore kutakura, netambo yakapoteredzwa nesimbi clip kuti urembedze pabhegi regorofu, inogona kuchengetedzwa pakadonha, inokodzera gorofu, kuvhima, kukwira makomo, uye nekunze kushandisa, Waterproof. Inosanganisira bhanhire bhandi kana iwe uchida kutakura yako renji yekuwana pasina yako gorofu bhegi Tsananguro dze Mini Gorofu Rangefinder; Range: 600m Ruvara: (Dema, Dzvuku, Bhuruu, Chena, Grey, Pinki) Bhatiri mhando: 3V, CR2 * 1 Zvikwata: M / YD Kururama: ± 0.5m
HighQuality Gorofu Kuisa Mat gorofu girini Wholesale- 深圳 市 飞 羊 运动 用品 用品 有限公司
Izvi zvisina kujairika Feyond gorofu bhuru bhuru inoteedzera iyo chaiyo gorofu girini, kuti iwe ugone kunakidzwa nekunzwa kweye gorofu kirabhu kumba! Saka kuti iwe unakirwe nekunakidzwa kwekutamba gorofu chero nguva, chero kupi! Iwe unogona zvakare kudzidzira kuisa, inova sarudzo yakanaka kune novices! Inoshandiswa muImba, hofisi, garaji, basa kana kunze, izvi zvakapusa kumisikidza Kuisa Greens ndiyo nzira iri nyore yekudzidzira yako ipfupi mutambo gore rese. Realistic Premium Turf Kuisa Surface kuti unzwe uye uite senge chaicho kuisa magidhi. Unogona kugadzirisa iyo green yechero saizi uye chimiro, uye zvakare gadzirisa yako pachako logo.Rega ive yako. Paunoshandisa, unogona kuumburudza ndokuutora. Paunoishandisa, unogona kuitora yakananga! Yakanyanya nyore, zvakare haizotora nzvimbo! Gorofu mutambo wekutsungirira uye kudzidza, uye vakanyanya gorofu vari kudzidza ingangoita awa yega yega yezuva vachidzidzira kusvetuka kwavo, nzira, uyezve kudzidza kudzora hasha dzavo pazvinhu zvisiri kufamba nenzira yavo. Iye zvino, haufanire kunge uri munzira yegorofu kana padanho rekutyaira kuti udzidzise uye upedzise mutambo wako. Izvo zvinogona zvakare kuitwa pamba kuburikidza ne feyond nyore yeakanakisa kuisa mameti, ayo anodzoreredza mamiriro egirini munzira dzako dzekumashure kusambogona. Ivo havasi chete gorofu vanoisa matauro ayo ane maburi pane kumucheto kumwe, iwo ari echokwadi, anobatsira, uye mazhinji akajairika zvachose, kuti akupe iwe kumwe kunetseka. Tsananguro dzeGoridhe Kuisa Green; Type: Kuisa Green Ruvara: Girinhi Package yaisanganisira: 1Pcs / set MOQ: 1pcs Zvinyorwa: PP + PE Hupenyu Huswa: makore 6-10
Nyanzvi yeGoridhe divot maturusi ekugadzira
Iyo dhizaini inogadzira inoita basa rakareruka rekugadzirisa girini. Gorofu vanofanirwa kutakura maturusi edivot navo kugorufu kuitira kuti vagone kugadzirisa chero kukuvara kwavanoona, zvichibatsira kuchengetedza kosi yacho zvakanaka mamiriro emunhu wese. Tsananguro yakadzama Kana iwe uchida kutonhodza gadget yegoridhe iwe pachako kana kupa sechipo, hazviite zvirinani pane switchblade divot chishandiso. Iyo ine maviri esimbi prongs ayo anotenderera kunze kwayo sekasi, kunge switchblade. Iwo ma prongs anoshandiswa kugadzirisa kukanganisa kune iyo turf pane iyo gorufu kosi, inowanzo kukonzerwa neve gorofu vanosangana nehuswa nezvikwata zvavo kana nemabhora egorofu anomhara pane inoisa green. Zviratidzo zve iyo switchblade divot chishandiso inoiswa mukati meiyo turf kumucheto kwekunze kwechiratidzo. Iwo mapendero anobva anyatso sundidzirwa kumashure akananga pakati kuti vhara mukaha. Iyi nzira inoshandiswa kuitira kuti iyo mucherechedzo unogadziriswa pasina kumwe kukuvara kunokonzerwa nehuswa midzi. Chinyorwa: simbi isina simbi + zinc alloy / aluminium / plastiki Kukura: 3 * 12cm (yakafukurwa) Kurema: 47g MOQ: 10 logo: yakagadzirirwa
Shenzhen Feyond Yemitambo Co, Ltd.
Shenzhen Feyond Sports Co, Ltd. ikambani yakasarudzika mukugadzira nekugadzira madiki uye makuru mabheji ezvigadzirwa zvegorofu uye zvimwe zvinopihwa gorofu, inovhara nzvimbo yefekitori ye1900sqm.
Inowanikwa muPurovhinzi yeGuangdong yeChina, tinogona kusangana nezvinodiwa kubva kumapoka akasiyana siyana evatengi vane zvigadzirwa zvakasiyana zvegorofu; Mazuva ano, isu tinotengesa uye tinogadzira ese marudzi ese egorofu zvigadzirwa uye gorofu zvinopihwa, senge yakanakisa gorofu zvishongedzo, gorofu kuisa tsika dzakateedzana, gorofu yekudzidzisa zvinoyamura uye gorofu famba mudzidzisi uye zvimwe zvigadzirwa zvemitambo yegorofu.
Kunze kwemitambo kunomanikidza uzivi hwe "Feyond gorofu, Usambomira". Tinotarisira kudzidza nezvezvaunoda uye kugadzira bhizinesi redu rakakura.
Tinotarisira kudzidza nezve zvaunoda uye nekugadzira bhizinesi redu rakakura
Mhosva-2. Iyi Hage keji yakaitirwa kosi yechiChinese yegorofu, vanozoishandisa ku pratice gorofu kumba, gorofu kurova keji kazhinji iri 3x3x3m, tinogona kugadzira saizi yako futi, asi vanhu vazhinji vanoshandisa saizi iyi, uye zvakare inogona uve nemachira akanangwa, iwe unogona zvakare kugadzira dhizaini yako kana logo pane yakatarwa jira, isu hatisi chete kugadzira gorofu ichirova keji, asi zvakare gadzira gorofu, iwe unogona kuzviona kubva kuvedio, kazhinji iri 1.5x1.5m.we unogona zvakare kugadzira imwe gorofu mat kana iwe uchida, iwe unogona kuona kubva kune edu mamwe zvigadzirwa katarogu, zvakare kana uchida, tinogona kukukwidzira iwe gorofu bhora, gorofu rabha tee, gorofu kirabhu pamwe chete, unogona kutenga chero zvigadzirwa zvegorofu kubva kwatiri, zvimwe zviri fekitori redu pachedu rakagadzirwa, mamwe ndiwo edu anoshanda pamwe chete anopa, isu tichaedza nepatinogona napo kukushumira zvakanaka.
Gorofu ichirova mambure Case1
Mhosva Iyi seti yekurova gorofu mambure yakaitirwa vatengi veUS, inotengesa US neCanada Market, uye yakaita kutengesa kwakanaka, seti yese inosanganisira hombe yekurova keji, pane keji ine mucheka wekutarisa, inogona kuita yako dhizaini uye mucherechedzo pane jira rakanangwa, zvakare uine gorofu gorofu, gorofu gorofu tee, bhuku uye hombe nylon bhegi kurongedza zvese. unogona kuzvishandisa pabindu rako kana pakirabhu kosi, tamba kumba ndiyo sarudzo yakanakisa, kana uine gadheni rako pachako, shandisa ichi dhizaini kurova keji chiitiko chinoshamisa, ndinovimba unochida uye unotenga kubva kwatiri Mashoko: Kukura kweCage: 2.2x3m Cage zvinhu: Polyester Target jira Saizi: 1.5x1.5m Target machira machira: Nylon - Gorofu yerabha tee: 3pcs paseti (chena, bhuruu, tsvuku) 1 hrs zvinhu zvenaironi muhombodo Logo, 1pcs Chinyorwa MOQ: mazana mashanu emhando Nguva yekutungamira: 30-40 mazuva ekushanda